Fandavam-bary sy ny famerenana amin'ny laoniny Marsh - Ellicott Dredges
Ny fametrahana ny tany sy ny tany
Ellicott Dredges dia mamolavola, manamboatra ary manome dredges asa mavesatra ho an'ny tetikasa fanarenana ny honahona. Ny dredges modely Swinging Dragon® mahazatra misy antsika 8-inch (200 mm), 12-inch (300 mm), ary 14-inch (350 mm) fahaiza-mivoaka, dia mora entina ary manolotra sakan'ny savily malalaka ho an'ny tena tsara indrindra ary manome tariby. -Fanokafana maimaim-poana - tsy misy tariby. Ireo dredge tohatra mihetsiketsika ireo dia nampiasaina tamin'ny tetik'asa famerenana amin'ny tany lemaka kely sy lehibe ary marobe.
Mifandraisa aminay ho an'ny teny nalaina manokana
Ny faritra mando dia faritry ny tany misy rano mandrakotra ny tany mandritra ny taona any amin'ny toerana toa ny honahona, dobo, renirano, farihy, farihy, ary heniheny masira. Ankoatr'izay, ny tany mando dia misy ny ankamaroan'ny rano velona eto an-tany ary toerana mety ho an'ny jono izay miteraka hazan-dranomasina voajinja ara-barotra. Ireo toerana ireo dia afaka manala ny toetr'andro amin'ny toetr'andro koa amin'ny alàlan'ny fitehirizana ny karbaona ao anatin'ny vondrom-piompiana sy ny tany fa tsy ny famoahana azy eny amin'ny rivotra.
Raha ny voalazan'ny National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dia mihoatra ny 80,000 hektara ny faritra mando amoron-dranomasina very isan-taona vokatry ny fikaohon-dranomasina sy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina. Ny hetsiky ny olombelona, ​​ny fivezivezena an-tanàn-dehibe ary ny fiakaran'ny oram-baratra dia anisan'ny mampisy fiovana izay manova ny toeram-ponenana amoron-tsiraka sy an-dranomasina rehefa mandeha ny fotoana. Ny antsanga efa nohamainina dia ampiasaina mba hiadiana amin'ity olana mihabe ity amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny faritra mando amin'ny tany, fanalefahana ny fikaohon-dranomasina ary ny fihenan'ny fiantraikan'ny tafiotra tampoka akaikin'ny morontsiraka.
Ny maha-zava-dehibe ny fitehirizana Marshes & Wetlands
Ny honahona sy ny heniheny dia toeram-ponenana mahavokatra ho an'ny biby goavambe toy ny trondro, vorona ary karazan-drano hafa. Izy ireo koa dia miaro ny morontsirak'ity planetantsika ity, misoroka ny tondra-drano, ny fikaohon-tany ary ny fidiran'ny rano. Ny fikorianan'ny voa voajanahary misy loto maloto sy ny fitsangatsanganan'ny tafio-drivotra dia manempotra ireo fantsona izay mamelona rano velona mankany amin'ny tany mando sy honahona. Ny fitrandrahana ireo faritra ireo dia ahafahan'ny rano mivezivezy amin'ireo faritra afovoan-tany mitondra otrikaina sy mamoaka fako.
Ny tsy fitovizan'ny Marshes sy ny Wetlands
Marshes dia tany mando izay tototry ny rano tsy tapaka. Manankarena otrikaina izy ireo ary toeram-piterahana akorandriaka sy crustacea. Marshes dia miforona ao amin'ny lemaka iva ambany akaikin'ny morontsiraka, renirano, na renirano. Manala ny otrikaina sy ny loto avy amin'ny rano izy ireo, ary koa manome sakana ara-batana amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny tafiotra mahery. I Marshes koa dia miaro ny faritra amoron-tsiraka amin'ny fikaohon-tany, miasa ho toy ny fiarovana farany amin'ny onja ary mametra ny tondra-drano amin'ny alàlan'ny fisotroana ranonorana.
Rehefa miakatra ny haavon'ny ranomasina dia mety hanjary hantsana anaty rano ny honahona ka hahafaty ireo zavamaniry izay hanakanana ny fikaohon-tany. Manampy amin'ny fanatsarana na famerenana amin'ny laoniny ny fivezivezana amin'ny fantsona. Ny antsanga izay atsofoka amin'ny fantsona iray dia azo ampiasaina ihany koa hanondrotana ireo honahona manodidina ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny morontsiraka.
Tombontsoa sy fanamby amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny Marsh sy Wetland
Ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny dia misy ny famerenan'ny tany maina na ny havan-tanety amin'ny toetrany voajanahary. Misy tombony ny famerenana indray ny faritra mando na honahona, ao anatin izany ny fanatsarana ny kalitaon ny rano sy ny fampitomboana ny habetsaky ny bibidia sy ny fahasamihafana. Ny sediment izay miora sy ampiasaina amin'ny tanjona famerenana dia manome tanjaka ny zavamaniry ary mahavita miakatra ny haavon'ny ranomasina. Rehefa tafatsangana tsara ny tany mando na havoana dia mampitombo ny zavamaniry, mamela ny oksizenina hamaka ny fakany sy ny ahitra natokana ho azy mandritra ny taona vitsivitsy taorian'ny nielezan'ny tsirony.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny honahona na ny honahona dia mety ho sarotra be. Raha tsy vita tsara ny toeram-ponenana dia tsy ho afaka maniry ny ahitra sy zana-kazo. Raha tsy mety amin'ny tontolo iainana ihany koa ireo fitaovana dredged toy ny fasika dia tsy hitazona izy ireo ary ho simba ny honahona efa tafaverina ary mety hamerina hamerina ny fahasimban'ny ala.